Manchester City oo aqbashay qiimaha lagu jebin karo heshiiska Lionel Messi! – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Manchester City oo aqbashay qiimaha lagu jebin karo heshiiska Lionel Messi!
By admin on 04/11/2018 No Comment
Axad, November, 4, 2018(HNN) Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa aqbashay inay bixiso lacag €250m oo ah qiimaha lagu jebin karay heshiiskiisa shan sano ka hor.
Waxay ahayd xilligii ugu dhowaa ee uu laacibkan ku biirri karay kooxda Man City, ka hor toddobaadyo inta uusan saxiixin heshiis waqti dheer ah, kaasoo €700m gaarsiiyay qiimaha heshiiskiisa lagu jebin karo.
Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Barcelona, Ferran Soriano oo hadda ka tirsan maamulka Cityzens ayaa lagu soo warramayaa inuu wada hadallo la yeeshay aabbaha dhalay Messi iyo wakiilka laacibka reer Argentina.
Wargeyska maalinlaha ah ee El Mundo ayaa sidoo kale sheegaya in qalalaaso siyaasadeed oo ka taagnaa gobolka Catalonia ay suuro-gal ka dhigeysay inuu ciyaaryahankan ka hayaamo kooxda Barcelona.
Captain-ka Blaugrana ayaa kusoo barbaarray kooxda reer Catalonia, isagoo kasoo qalin jebiyay kulyadda La Masia, waxaana uu la gaarray guullo waaweyn oo ay ka mid yihiin sagaal jeer oo La Liga ah iyo afar jeer oo Champions League-ga.
32-jirka shanta jeer Ballon d’Or ku guuleystay ayaa u muuqda mid xirfaddiisa kubadda cagta ku idleyn doono garoonka Camp Nou, waxaana dhowr jeer uu iska diiday qandaraasyo qaalli ah oo uu ugu biirri karay kooxo kale.
Manchester City oo aqbashay qiimaha lagu jebin karo heshiiska Lionel Messi! added by admin on 04/11/2018